Muri pano: musha / Software bug / Nzira yekugadzirisa sei Windows Gadziridza Error 80244019
Windows Kwidziridzo ndiyo dura rezvinhu zvese zvazvino Windows kubva kuMicrosoft. Vashandisi vanowanzo gamuchira zvigadziriso kazhinji nekuda kweizvi Windows Gadziridza sevhisi. Izvi Windows Kwidziridzo mashandiro kunoenderana nemasevhisi mazhinji seBITS kana Background Intelligent Transfer Service, Windows Gadziridza sevhisi, Windows Server Gadziridza Sevhisi uye nezvimwe. Uye nekuda kweichi chakaomarara asi chinobudirira kuendesa system, dzimwe nyaya dzinogona kuitika. Imwe yekukanganisa kwakadai ndeye 80244019. Iyi kodhi yekodhi inoshanda kune Windows Server inoshanda masisitimu chete, uye nhasi tichave tichifukidza akati wandei zvingangogadziriswa zveakafanana mune ino chinyorwa.
Uku kukanganisa 80244019 kunowanzo kukonzerwa nekuda kwezvinhu zvinotevera:
Inotadza uye yakashatisa mafaira eDLL kana Registry Entries.
Faira haina kuwanikwa pane seva.
Chinyakare Kugadziriswa kwe Windows Gadziridza sevhisi pamucheto wemutengi.
Izvi zvinotungamira kune dzinoverengeka nyaya. Zvimwe zvezviratidzo zvekukanganisa uku ndeizvi:
Kuderera mukushanda kwemaitiro.
Kutanga uye Shut Down nyaya.
Software yekuisa zvikanganiso.
Nyaya dzinobatanidza zvishandiso zvekunze.
Nyaya dzisingatarisirwi kubva kumapurogiramu uye kushandiswa.
Fix Windows Gadziridza Error 80244019
Kuti ndigadzirise Windows Kwidziridzo Kanganiso 80244019, isu tinofanirwa kuita zvinotevera gadziriso:
Kutangazve akasiyana-siyana akanangana neWU masevhisi.
Vhura Dhata Yechengetedzo Yekudzivirira (DEP).
shandisa Windows Gadziridza chinetso.
Dzokororazve Windows Gadziridza marongero.
Tora zvinyorwa zvinodiwa nemaoko.
1] Kutangazve mabasa akasiyana ane hukama
Tanga nekurova hono WINKEY + X michina uye sarudza Raira Prompt (Admin) kuti atange Command Prompt neHurumende.
Zvino kopira uye unyore mirairo inotevera imwe neyayo mu Command Prompt console uye hit Pinda.
net kumira wuauserv net kumira bits
Izvi zvichamisa zvese Windows Kwidziridzo Services inomhanya pane yako Windows 10 PC.
Zvino, iwe uchafanirwa kutanga izvi zvese Windows Kwidziridzo Services isu tangomira.
net kutanga wuauserv net kutanga mabheti
Tarisa kana ichi chakakukanganisa iwe.
2] Vhura Dhaiti Yakauraya Dziviriro (DEP)
Dhavhidha Kuuraya Kudzivirira kuri kudzimwa kungave chikonzero chechikanganiso ichi chataurwa pamusoro apa. Unogona vhura Dhijita Yekuuraya Kudzivirira (DEP) uye tarisa kana izvo zvinogadzirisa kukanganisa uku.
3] Shandisa Windows Gadziridza Troubleshooter
Iwe unogona zvakare kuedza kugadzirisa nyaya iyi kuburikidza nayo Windows Gadziridza chinetso.
4] Kugadzirisazve Windows Gadzirisa Zvirongwa
Unogona kuchinja marongero anotevera mu Windows Gadziridza chikamu uye edza kugadzirisa iyi kukanganisa,
Tanga nekurova hono WINKEY + ini bhatani bhatani kuvhura Settings App.
Zvino, tora Kwidziridzo & Chengetedzo. Pasi pechikamu che Windows Zvidzoreso> Gadziridza Zvirongwa, click on Zvimwe Zvinyorwa.
Pakupedzisira, Uncheck sarudzo inoti Ndipe zvigadziriso zveimwe Zvigadzirwa zveMicrosoft pandinogadziridza Windows.
Rotazve komputa yako kuti shanduko dzitore uye utarise kana zvagadziriswa nyaya yako.
5] Ita zvinodiwa Updates manually
Kana iyo isiri Nyaya inoshandiswa, uye chete Kuwedzera Kwekuvandudza, unogona manyore kurodha pasi uye kumisikidza iyo Windows Update. Kuti uwane kuti zvinyorwa zvipi zvakakundikana kutevera matanho:
Enda kuZvirongwa> Kwidziridzo uye Chengetedzo> Wona Ongorora Nhoroondo
Tarisa kuti chii chakakanganiswa chakakundikana. Mharidzo dzakakundikana kuisa dzicharatidza Dzakatadza pasi peChimwe chinyorwa.
Zvadaro, enda kune Centre Download Download, uye tsvaga chiitiko ichocho uchishandisa nhamba yeK KB.
Paunenge waiwana, teerera, uye uiise iyo manyore.
Unogona kushandisa Microsoft Ongorora Catalogue, basa rinobva kuMicrosoft rinopa urongwa hwemapuraneti ezvinyorwa zvinogona kugoverwa pamusangano wekambani. Kushandisa Mutauro weComputer Updates kunogona kuva nzvimbo imwe chete yekutsvaga Microsoft software updates, drivers, uye hotfixes.
Kana iri Chiitiko cheNhau, iwe unogona kuvimba nguva dzose nenzira dzinotevera kuti utengese kompyuta yako,
Unogona kuedza kuwana shanduro yezvino Windows 10 kuiswa uye kuiswa pa kombiyuta yako. Izvi zvinogona kugadziridzwa kana download Windows 10 uye Media Creation tool or kuwana ISO faira ye Windows 10.
Kana iwe unogona kuedza Kudzorerazve yako Windows 10 kombiyuta.